Microsoft ISA and Sygate Firewall Pro — MYSTERY ZILLION
Microsoft ISA and Sygate Firewall Pro
ကျွန်တော့်ဆာဗာမှာ Microsoft ISA Server နဲ့Run ထားပါတယ်...။ ခု... ကျွန်တော် လုပ်ချင်တာက ဘေးအိမ်က ကျွန်တော့်ဆိုင်ကနေ အင်တာနက်လိုင်းခွဲယူချင်ပါသတဲ့.. ခွဲပေးလို့ရပါတယ်...။
ကျွန်တော်က သူတို့ အင်တာနက်လိုင်းကို Router နဲ့ပြန်ခွဲပြီး အခြားအိမ်တွေကို ပြန်ခွဲရောင်းမှာစိုးလို့ (တကယ်တော့ အဲ့အိမ်က ခုတောင် Router ကို Wireless လွှင့်ပြီး အခြားအိမ်တွေကို ခွဲပေးနေပါပြီ...။ ကျွန်တော့်ဆီက လိုင်းတလိုင်းထဲယူပြီး လုပ်စားနေတာပါ...။) အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က Sygate Personal Firewall Pro ဆိုတဲ့ Firewall သုံးမလို့ စမ်းကြည့်ပါတယ်...။ ဒီ firewall က Inbound , Outbound Traffic မှန်သမျှအကုန် Block (ပိတ်ထား) ပါတယ်...။ အကယ်၍သုံးချင်ရင် IP address, or , MAC address ထည့်မှ ဖွင့်ပေးပါတယ်..။
ခုဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာက အဲ့ Firewall ထဲမှာ ကျွန်တော့်လက်ရှိဆာဗာရဲ့ MAC address ကိုဖြည့်ပြီး Internet Access Traffic ပေးထားပါတယ်.. သုံးလို့လည်းရပါတယ်... LAN (Local Area Network) ကိုလည်း Allow လုပ်ထားပါတယ်.. အဲ့ဒါကြောင့် ဆိုင်က အခြားစက်တွေကို Local Access ရှိပါတယ်...။
ခက်တာက အဲ့ဆိုင်က Local စက်တွေရဲ့ MAC address, IPaddress ဘာပဲ ပေးပေး အဲ့စက်တွေက ဆာဗာနဲ့ပဲ Ping ရိုက်လို့ရပြီး အင်တာနက်သုံးမရဘူးဖြစ်နေပါတယ်...။ ဘယ်လိုများလုပ်ရမလဲဆိုတာ မသိတော့ပါဘူး...
ကျွန်တော်ထင်တာက ISA server နဲ့များ ညှိနေလို့လား...။ ဘာ Services ကို Allow လုပ်ဖို့ကျန်မိလို့လဲမသိဘူး..။ ကျွန်တော်လည်း Manual ကို ဖတ်ပြီး သေချာလုပ်တာပဲ..။ ဒါပေမယ့် အဲ့ Client PC တွေက Local Access တော့ရပြီး Internet Access မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်..။
Sygate Personal firewall Pro ဆိုတာ Firewall တစ်မျိုးပါပဲ... Server တွေမှာ အသုံးများတယ်...။ MAC address နဲ့ Client PC တွေရဲ့ connection ကို ပိတ်ထားလို့ရတဲ့ Firewall မို့သုံးချင်တာပါ..။
ကျွန်တော်ကတော့ isa server နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိပ်မသိပါဘူး . . .အခုမှ လေ့လာသင်ယူနေတုန်းပါ . . . ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့ အကြံတစ်ခုပေးချင်ပါတယ် . . . Bandwidth Control လုပ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ် . . . အဲ့ဒါဆိုရင် သူဘက်က ဘယ်လောက်ပဲ ပွါးသုံးသုံး . .ကိုယ့်ကိုမထိခိုက်တော့ပါဘူး . . . ဥပမာ ။ ။ သူ့ကို 100K နဲ့ Limits လုပ်ထားရင် သူ့ဘက်က 10 လုံးပွါးသုံးလညး် သူ့ဒေါသနဲ့သူ တစ်လုံးကို 10 K ပဲရတော့မှာပါ . .
အကိုပြောသလိုပဲ ISA Server မှာ MAC Address ကို ပိတ်ဖို့အတွက် Nortan Internet Securiy ကို သုံးပြီး ပိတ်တာပါ။
အောက်ကလင့်မှာ ဖတ်ပြီး စမ်းကြည့်ပါလား .. အကိုဖတ်ပြီးလောက်ပြီးထင်ပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းက MAC address အစား maximum connection ကို ပိတ်မှာပါ။
ဥပမာ .. ဆာဗာတစ်လုံးကနေ နောက်ထပ် ဆာဗာထပ်ခံပြီး မပေးနိုင်အောင် ပိတ်သလိုမျိုးပေါ့ ..
ရမရတော့မသိဘူး .. အောက်ကလင့်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအကို။
ISA 2006 အတွက် အခုလို သူက configure လုပ်ပြထားပါတယ်။
On the ISA Server computer, open ISA Server Management (Start > All Programs > Microsoft ISA Server > ISA Server Management.)
On the Flood Mitigation tab, edit the setting for Maximum concurrent TCP connections per IP address.
5. To override the default connection limit for specific IP addresses, in Custom limit, type the maximum number of connections allowed for specific users. Marshal suggestsaminimum value of 2000.
6. On the IP Exceptions tab, click Add. Add the address of the WebMarshal server.
အဲဒါလေး အကိုရတယ်ဆိုရင် ဒီနေရာလေးမှာ ပြန်ပြောပေးပါဦးနော် ..
နောက်တစ်ခု အကို Kerio Control သုံးရင်လဲ MAC Address နဲ့ သတ်မှတ်ပိတ်ပင်လို့ရပါတယ်အကို။
isa server မှာ Bandwidth Splitter ဆိုတဲ့ third party extension တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ရင် bandwidth control လုပ်လို့ရပါတယ်
Antamedia လိုမျိုး သီးသန့် ဆော့၀ဲတွေလည်းရှိပါတယ်
ဟိုဘက်ကစက်က အနည်းဆုံး အိုင်စီအက်စ်နဲ့ရှဲပြီးသုံးလို့ရနေမှာပါ
bandwidth control လုပ်လိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်